-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ စာအတုတစ်စောင် လူ… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ စာအတုတစ်စောင် လူ…
· 8 months ago ·21 Comments
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ စာအတုတစ်စောင် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေ
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကို ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းများ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ
-အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ လူမျိုးတုံးသုတ်သင်မှုမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောဆို စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်း သတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 5.7K Share – 879
ယင်းမာပင်အရှေ့နဲ့ ဆားလင်းကြီးမြောက် ရွာပေါင်းစုံ ၂၇၇ ရက်မြောက် ရွာပေါင်းစုံ သပိတ်စစ်ကြောင်း
Radio NUG – Dec 10th, 2021, 2:30PM
Peacock Itachi says:
2021-05-13 at 7:03 PM
Nug အစိုးရ ဘာလုပ်နေလဲ လက်နက် မထောက်ပံ့နိင်ပဲ လေအစိုးရပဲလား
Kyaw Thit says:
2021-05-13 at 7:09 PM
Day by day, you guys are becomingacontent creation group. ☺️
Mehm Oung Janue says:
2021-05-13 at 7:13 PM
No need to suppout BUG.
2021-05-13 at 7:16 PM
ညနေပိုင်း လို့ editပြန်လုပ်ပါ
Aung Kyaw Ya says:
2021-05-13 at 7:17 PM
အင်းစိန်ထောင်ထဲတွင် ယုတ်မာရက်စက်မှု သတင်းအခိုင်အမာ ထွက်ပေါ်
ICRC ကို အကူညီတောင်းကြပါ ကူညီပေးကြပါ
မအလ တွေ ယုတ်မာနေကြပါတယ်
#အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကယ်ပေးကြပါဦးဗျာ
ကျနော် ကျော်ဇေ 10 ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီ က ဆေးမှု ပြစ်မှုမထင်ရှားသဖြင့် ပြန်လွတ်လာပါသည်။
ထောင်တွင်းအခြေအနေ အရမ်းဆိုးနေပါတယ်ဗျာ တချို့လူတွေ မသေသေးပဲ ဒဏ်ရာတွေကိုလဲဆေးမထည့်ပေးပါ
တချို့တွေ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပေါင်ပွင့် ခြေထောက်ပွင့်လျှက် ဒီတိုင်းပစ်ထားတယ်
တချို့တွေ Feb လထဲက ဖမ်းထားတာ လက်ပြတ်လျှက် အဝတ်စပဲပတ်ပေးထားတယ်
မေးမေးပြီး ရိုက်နှက်နေတာ နေ့တိုင်း
သေခွင့်ပေးပါတော့လို့တောင် ဘေးခန်းက အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့တောင်းပန်သံ အတိုင်းသားကြားနေရတယ်
ထမင်းလဲ ပုံမှန်မကျွေးဘူး တနေ့ ပေါင်မုန့်တစ်ခုနဲ့ ရေပဲတိုက်တယ်
ကျနော့ကိုလဲ နေ့တိုင်း ပေါင်မုန့်တစ်ခုကို ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီး ပစ်ကျွေးနေကျ
အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်လို့ ဖမ်းထားခြင်းခံရသူတွေဆို စဉ်းစားသာကြည့်ပေးကြပါ
ကျနော်မလွတ်လာခင် စင်္ကြံတစ်လျှောက် ကလေးတွေ သစ္စာဆိုနေကြတယ်
တခြားသူတွေ သူတို့လို အဖမ်းမခံကြရစေဖို့ ကျနော်ဗျာ မျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘူး ငိုကြွေးခဲ့ရတယ် သူတို့လေးတွေကို ကြည့်ပြီး
တောင်ဥက္ကလာပ က အဖမ်းခံထားရတဲ့ ညီလေး ပြောပြချက်က feb ကထဲက ဖမ်းခံထားရတဲ့ နွေဦးသူရဲကောင်းလူငယ်တချို့ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားပြီတဲ့ဗျာ
နေ့တိုင်း အလောင်းသယ်သယ်သွားနေတာ မြင်နေရတယ်တဲ့
PLEASE, PLEASE, PLEASE…. Do Something !!
At least COPY & PASTE this message on Your Timeline !!
Please HELP those INJURED Detainees at Insein Prison
My name is Kyaw Zay , released from the above prison on 14/04/21 as my case (drug abuse ) was found not liable.
Situation in the prison is absolutely Horrific !!
Some injured detainees are barely alive with their open wounds being heavily infected with maggots .
Some with gun shot wounds on the thigh / legs are still medically unattended since the arrest. One with badly injured hands was arrested since February , but the wound was wrapped withabandage without any proper treatment.
I heard , these young detainees
I heard some , repeatedly beaten prisoner(s) , begging to finish them off altogether 😢😢, as they cannot bare it any more.
Daily food we had was justaslice of bread with water .
Myself , arrested with drug case, was also givenaslice of bread ( shoveled into my cell with bare foot ) and water .. I dare not think how these protesters against the junta will be treated .
When I heard these young detainees taking vows on ” their fellow protesters’ freedom and shall never get arrested like themselves ” , I could not help myself, but cried .
According toayouth arrested during the raid of South Okkalarpa , some of his fellow protesters of Myanmar Spring Revolution , arrested since February were beaten to death , as he saw the bodies being taken away daily .
If No ONE , including the International communities did not intervene/ help these prisoners , they all might have to face the same destiny as their comrades . PLEASE , Do something to help these youngsters !!
အလြမ္း ေလေျပ says:
2021-05-13 at 7:24 PM
Ok မသ္​ိပါ ​ေမးမယ္​ အရင္​က တခ်ိန္​က​ေပါ့ ဘာလာမယ္​ ဘယ္​ဟာလာမယ္​ ​ေျပာ​ေနၾကတာ မ​ေျပာဘူး လူကို ဘယ္​​ေခြးသားမ​ေအလိုး​ေတြ လာ တက္​​ေဟာင္​​ေလ ​ေခြးသား​ေတြ ထမင္​စားရင္​ က်ဳပ္​​ေျပာသိမွာပါ
Sai Aung says:
2021-05-13 at 7:25 PM
NUG ရေ အရှုံးပေးရင်လဲပေးလိုက်တော့ကွာ အခုချိန်ထိ ဘာမှထိရောက်တာ မလုပ်သေးဘူး
2021-05-13 at 7:26 PM
2021-05-13 at 7:27 PM
ဘာလဲ ​ေခြးသား​ေတြ R2p CRPH. ​ေျပာတယ္​ Dr sasa
Han Swe says:
2021-05-13 at 7:58 PM
Sai Shwe Htoo says:
2021-05-13 at 8:01 PM
Myo Zawoo says:
2021-05-13 at 8:21 PM
သတင်းကြော်ညာရာတွင် mrtv လို မကြော်ညာ ပဲ တိုတိုနဲ့လိုရင်းကို ထိထိမိမိကြော်ညာစေခြင်တယ် အခုကြော်ညာနေတဲ့ပုံစံက မယားငယ် ခိုးစား နေသလိုပဲ နားထောင်လို့ကို မရဘူး
Hein Ko says:
2021-05-13 at 8:41 PM
Every Loveday says:
2021-05-13 at 8:49 PM
Êmc Käung Lăy says:
2021-05-13 at 9:02 PM
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောသလိုရရာလက်နက်နဲ့ ဆက်တိုက်ပါတဲ့လား။
ဘယ်လောက်အသက်တွေ ဘဝတွေ ပေးဆပ်ပီးမှ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့အားပေးစကားကို။ မျက်ရည်တွေ။ သွေးစက်တွေ။
သူရဲကောင်း ဆိုတာ ဘယ်သူ့တိုက်တွန်းမှု ဘယ်သူ့မြှောက်ပင့်ပေးမှုမှမပါပဲ မတရားမှုကို ရဲဝံ့စွာ တော်လှန်ရဲခြင်းပဲ။
မြေပြင်ကလက်ရှိပကတိအခြေအနေတွေကို သေခြာလေ့လာပြီး အမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးမစ်ရှင် တွေချပါတော့လို့ တောင်းဆိုပါ၏။
Aung Min Swe says:
2021-05-13 at 9:28 PM
နူရာဝဲစွဲ လဲရာသူခိုးထောင်းဆိုသလို စစ်တပ်ကို တော်လှန်နေပါတယ်ဆိုမှ လေအိုးအစိုးရက ထပ်ပီးလေနဲ့ဒိုးခထပ်ပေးပြန်သေးတယ်၊ ဟူး၊ အဲ့အဖွဲ့ ထွက်ပေါ်မလာရင် အကောင်းသားကွာ
2021-05-13 at 10:33 PM
NUG ရဲ့ ပေါ့ဆမှုပါ အရင်ကြေညာချက်တွေမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဝန်ကြီးတွေရဲ့ လက်မှတ်ကို မဖျောက်ပဲ လိုင်းပေါ်တင်တဲ့ ပေါ့ဆမှုပါ
နွေ ဦး ဇူ says:
2021-05-13 at 10:40 PM
ခြပ္ေဒါင္း သစၥာ says:
2021-05-14 at 12:03 AM
Ma Khin Ei says:
2021-05-14 at 9:33 AM
အမွှေစိန်တွေ အင်တိုက်အားတိုက်မွှေဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ တို့ပြည်သူတွေ သတိ အသိပိုရှိပြီး စည်းလုံးနေကြဖို့ ပိုလိုလာပြီ။ ဒလန်နဲ့ အမွှေစိန်လုပ်တဲ့ လက်နှက်က သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးမဆင်းခင် လက်နှက်ပါ။
တို ရာ တိုရာ ဘန်ဇိုင်း says:
The Man Behind the Camera (May 13/2021)
People Stand with Gen-Z (အင်တာဗျူး)…